Bit By Bit - Running fanandramana - 4.1 Sava lalana
Ao anatin'ireo fomba fijery voarakitra ato amin'ity boky ity-fitondran-tena mijery (toko 2) sy mametra-panontaniana (toko 3) -fikarohana ireo firaketana ny angon-drakitra tsy misy fanovana sy manova tanteraka ny tontolo. Ny fomba fiasa mifandraika amin'ny fanandram-panatanterahana ny toko dia samy hafa. Rehefa mikaroka fanandramana ireo mpikaroka, dia miditra an-tsehatra izy ireo manerana izao tontolo izao mba hamorona angona izay mifanentana tsara amin'ny famaliana fanontaniana mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ny sehatra.
Antony mahomby sy mahomby no tena mahazatra amin'ny fikarohana ara-tsosialy, ary ohatra ny ohatra dia ahitana fanontaniana toy ny: Mampitombo ny fianarana mpianatra ve ny fampitomboana ny karaman'ny mpampianatra? Inona no fiantraikan'ny karama ambany indrindra amin'ny tahan'ny asa? Ahoana no fiantraikan'ny fiforonan'ny asan'ny mpiasan'ny asa iray ny fahafahany hahazo asa? Ankoatra ireo fanontaniana maningana, indraindray ireo fanontaniana sy valiny mahakasika ny antony mahakasika ny vokatra dia tsy misy ifandraisany amin'ny fanontaniana ankapobeny momba ny fampitomboana ny metric sasany. Ohatra, ny fanontaniana hoe "Inona no loko tokony homena ny bokotra fanomezana amin'ny tranokalan'ny fikambanana tsy miankina iray?" Dia fanontaniana maro be momba ny fiantraikan'ny loko bokotra samihafa amin'ny fanomezana.
Ny fomba iray hamaliana ny fanontaniana sy ny fiantraikan'ny fanontaniana dia ny hitadiavana lamin'asa amin'ny antotanisa efa misy. Ohatra, mamerina amin'ny fanontaniana mikasika ny vokatry ny salan-taonan'ny mpampianatra amin'ny fianarana mpianatra, dia mety hanombatombana fa ny mpianatra dia mianatra bebe kokoa any amin'ny sekoly izay manome salan-karama ambony. Saingy, mampiseho ve io fiaraha-miasa io fa ny karama ambony dia mahatonga ny mpianatra hianatra bebe kokoa? Tsia mazava ho azy. Ireo sekoly izay hahazoana mpampianatra bebe kokoa dia mety ho hafa amin'ny lafiny maro. Ohatra, ireo mpianatra any an-tsekoly miaraka amin'ny karama ambony mpampianatra dia mety avy amin'ny fianakaviana manankarena. Noho izany, ny zavatra tahaka ny vokatry ny mpampianatra dia azo avy amin'ny fampitahana karazana mpianatra samihafa. Ireo fahasamihafana tsy misy ifanarahana eo amin'ny mpianatra dia antsoina hoe confounders , ary, amin'ny ankapobeny, ny fahafahan'ny mpanafika dia manakiana ny fahaizan'ny mpikaroka hamaly ny fanontaniana sy ny fiantraikany amin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fitadiavana lamin'asa amin'ny antotanisa efa misy.
Ny vahaolana iray amin'ny olan'ny fitondran-tena dia ny manandrana manao fampitahana marina amin'ny fanitsiana ny fahasamihafana hita eo amin'ny tarika. Ohatra, mety ho afaka mandefa angon-drakitra momba ny hetra avy amin'ny tranonkalan'ny governemanta ianao. Avy eo, afaka mampitaha ny fahombiazan'ny mpianatra any an-tsekoly izay hitovy ny vidin'ny trano nefa tsy mitovy ny karaman'ny mpampianatra, ary mety mbola hitanao fa ny mpianatra dia mianatra bebe kokoa any an-tsekoly amin'ny karama ambony amin'ny mpampianatra. Saingy mbola maro dia maro ny mpikorisa. Angamba ny ray aman-drenin'ireo mpianatra ireo dia samy hafa amin'ny fampianarana omeny. Na mety tsy mitovy ny sekoly eo akaikin'ny tranombokim-panjakana. Na angamba ireo sekoly manana mpampianatra ambony dia manana karama ambony kokoa ho an'ny tale lefitra, ary ny karama fototra, fa tsy ny mpampianatra mandoa, dia tena mampitombo ny fianarana mpianatra. Azonao atao ny manandrana mandrindra sy manitsy ireo antony ireo, saingy ny lisitr'ireo fitondran-tena mety dia tsy misy farany. Amin'ny toe-javatra maro, tsy afaka mandre sy manitsy ny mety ho an'ny mpanafika rehetra ianao. Ho setrin'io fanamby io, ireo mpikaroka dia namolavola teknika maromaro hanaovana fanombatombanana avy amin'ny angon-drakitra tsy misy fanandramana-dia noreseko ny sasantsasany tamin'izy ireo tao amin'ny toko faha-2 - fa, ho an'ny karazana fanontaniana sasany, voafetra ireo teknika ireo, ary manolotra fanantenana hafa.
Ny fanandramana dia mamela ireo mpikaroka hivezivezy mihoatra ny fifandraisana amin'ny angona voajanahary mba hametrahana valiny azo antoka momba ny antony sy ny vokany. Amin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana, matetika dia sarotra sy lafo ny fanandramana. Ankehitriny, amin'ny vanim-potoana nomerika, dia mihena tsikelikely ny fifandonana eo amin'ny lojistik. Tsy mora kokoa ny manao fanandramana toy ny nataon'ireo taloha, fa azo atao ny manao karazana fanandramana vaovao.
Amin'ny zavatra nosoratako hatreto dia somary votsaoka amin'ny fiteniko aho, saingy zava-dehibe ny manavaka ireo zavatra roa: fanandramana sy fanandramana mifehy tsy tapaka. Ao anatin'ny fanandramana iray , ny mpikaroka dia miditra an-tsehatra manerana izao tontolo izao ary avy eo mamarana ny vokatra. Efa naheno ity fomba fiasa ity aho izay voalaza fa "mampikorontana sy mitandrina." Ao anatin'ny fanandramana mifehy ny fakantsary dia misy mpikaroka mandalo amin'ny olona sasany fa tsy amin'ny hafa, ary ny mpikaroka dia manapa-kevitra hoe iza no mahazo ny fidirana amin'ny alàlan'ny randomisation (ohatra hoe mandoaka vola madinika). Ny fanandramana mifehy ny fanaraha-maso dia mametraka fitovozana marina eo amin'ny tarika roa: iray izay nahazo ny fitsabahana sy ny tsy manana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fanandramana mifehy tsy tapaka dia vahaolana amin'ny olan'ny fitondran-tena. Ny fanandramana sy fanaraha-maso ny fanandramana dia mitambatra ihany koa ny tarika tokana izay nahazo ny fitsabahana, ka noho izany dia mety hitarika ny mpikaroka hanatsoaka hevitra (araka izay hampiseho tsy ho ela) ny valiny. Na dia eo aza ny fahasamihafana manan-danja eo amin'ny fanandramana sy ny fanandramana mifehy ny fanaraha-maso, matetika ireo mpikaroka ara-tsosialy dia mampiasa ireo teny ireo amin'ny fifandanjana. Hanaraka ity fivoriambe ity aho, saingy, amin'ny lafiny sasany, dia hanapaka ny fivoriambe aho hanamafisana ny sandan'ny fanandramana mifehy tsy tapaka mikasika ny fanandramana tsy misy famandrihana sy vondrona mpitantana.
Ny fanandramana mifehy ny fanaraha-maso dia nanaporofo fa fomba mahery vaika hianarana momba ny tontolo sosialy, ary ato amin'ity toko ity dia hasehoko anao bebe kokoa ny fomba fampiasana azy ireo amin'ny fikarohana nataonao. Ao amin'ny fizarana faha-4.2, dia asehoko ny lojika fototra fanandramana amin'ny ohatra iray amin'ny fanandramana amin'ny Wikipedia. Avy eo, ao amin'ny fizarana 4.3, dia hamaritra ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanandramana laboratoara sy ny fanandramana eo amin'ny sehatra ary ny fahasamihafana eo amin'ny fanandramana analoga sy ny fanandramana nomerika. Ankoatra izany, dia hanamafy aho fa ny fanandramana nomerika nomerika dia afaka manolotra ny toetra tsara indrindra amin'ny fanandramana momba ny laboratoara analôsy (fifehezana mafy) sy ny fanandramana an-tserasera (realisme), amin'ny ambaratonga rehetra izay tsy azo tanterahina teo aloha. Amin'ny manaraka, ao amin'ny fizarana 4.4, dia hamaritra tetikasa telo aho-ny fahamendrehana, ny heterogeneity ny fiantraikan'ny fitsaboana, ary ny rafitra-izay tena ilaina amin'ny fananganana fanandramana manan-karena. Amin'io fiaviana io dia hamaritra ny fifanakalozam-bola tafiditra ao anatin'ireo paikady roa lehibe amin'ny fitarihana ireo fanandramana dizitaly aho: manao izany na miara-miasa amin'ny mahery. Farany, hifarana amin'ny toro-hevitra manokana momba ny fomba ahafahanao manararaotra ny hery matanjaka amin'ny fanandramana nomerika (fizarana 4.6.1) ary manoritsoritra ny andraikitra soloin'ny hery (fizarana 4.6.2).